किन परपुरुषसँग अवैध सम्बन्ध राख्छन् विवाहित महिला ? – Jagaran Nepal
विवाहित महिलाहरुले आफ्नो पति हुँदाहुँदै प’रपुरुषसँग किन अ’वैध स-म्बन्ध राख्छन् त ? प्रश्न निकै ज’टिल छ । कुनै पनि प’रपुरुषसँग शा’रीरिक स-म्बन्ध राख्ने इ’जाजत हाम्रो संस्कृतिले दिँदैन ।तर पनि कतिपय महिलाहरु प’रपरुषसँग आ’कर्षित हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण व्यक्तिगत रुपमा फरक-फरक हुनसक्छ । त्यसमा पनि मुख्यतया पाँच कारण नै बढी जिम्मेवार हुने गरेको पाइन्छ ।